Madaxweyne Siilaanyo oo Maanta safar ugu baxaya Gobolada bari ee Dalka. | Maalmahanews
Madaxweyne Siilaanyo oo Maanta safar ugu baxaya Gobolada bari ee Dalka.
Hargeisa-(Maalmaha News): Madaxweynaha Jamhuuriyada Somaliland Mud. Axmed Maxamed Maxamuud SIilaanyo iyo wafti uu hoggaaminayo ayaa la filayaa iney maanta(Axad) safar ugu baxaan gobolada bari ee dalka, gaar ahaan gobolada Sool iyo Tog-dheer.
Lama oga sababta rasmiga ah ee socdaalka madaxweyne siilaanyo xiligani uu salka ku hayo, hasayeeshee sida warar ku dhadhawi u xaqiijiyeen shabakada maalmahanews safarka Madaxweynaha ayaa ku jihaysan ka qaybgalka xuska ciidamada Qaranka oo ku beegan maalinta Salaasada ee bishu tahay 02/02/2016, iyadoo sanadkan xuska ciidanka qaranka lagu qaban doono Dagmada Oog ee Gobolka saraar.
Dabaal daga munaasabada sanad guurada aasaaska ciidanka qaranka oo hore loogud qaban jiray caasimada Hargeisa ayaa sanadkan loo asteeyey dagmada Oog, halkaas oo uu Madaxweyne siilaanyo kaga qayb gali doono.
Dhinac kale waxaan safarka Madaxweynaha ka madhnaan doonin arrimo siyaasadeed iyagoo wakhtigan ay si weyn gobolada bari ugu tartamayaan xisbiyada KULMIYE IYO WADANI.
Deegaanada uu madaxweynuhu u safrayo iyo guud ahaanba deegaanada uu samarayo gaar ahaan Gobolada Tog-dheer iyo Caynaba ayaa ah meelaha uu xisbul xaakimka Kulmiye sida ugu iskugu halaynayo, sidaa darteed waxa la filayaa in aanu socodka madaxweynaha ka madhnaan doonin ololale taageero doono ah.